WACAAL GACAN KOOWAAD AH: ”Ninkii gabadha KHAARAJIYEY oo ka sheekeeyay ”sababta” uu u diley & waxa dhacay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka WACAAL GACAN KOOWAAD AH: ”Ninkii gabadha KHAARAJIYEY oo ka sheekeeyay ”sababta” uu...
WACAAL GACAN KOOWAAD AH: ”Ninkii gabadha KHAARAJIYEY oo ka sheekeeyay ”sababta” uu u diley & waxa dhacay!
(Eldoret) 10 Abriil 2019 – Ninkii gaystey weerarkii bahalnimada ee ka dhacay Jaamacadda Moi, Naftali Njahi Kinuthia, 28 jir, ayaa ka sheekeeyay wax uu ku sheegay sababta uu qudha uga jaray Ivy Wangechi, 25-jir oo uu ku diley iska kambaska wayn ee Jaamacadda Moi University.
Kinuthia ayaa sheegay in uu dareen iyo duunyaba ku beelay gabadha uu diley, balse aysan u gudin abaalkii maaliyadeed iyo midkii jacayl ee uu u muujiyay.
“Wuxuu sheegay inuu lacag usoo diray kaddib markii ay sheegtay inay agaasimayso xafladda dhalashadeeda wuxuuna sheegay in kaddib ay bilowday inay telefoonka ku dhegeysato, isna uu markaa guddoonsadey inuu kasoo safro Thika ilaa Eldoret si uu u ogaado sababta ay cirka ugu fiirinayso,” ayuu ku yiri dembi baaraha Eldoret East DCI, Mr Kingi oo isna la hadlay EDAILY.
“Markii uu isagu [Kinuthia] Eldoret yimid [Isniintii], waxay weli ku dhegeysanaysey telefoonka, iyadoo markii dambe ka dansatey,” sida uu eedaysanuhu sheegay.
”Sida uu sheegay, taasi waxay keentay inuu aad u caroodo oo uu markaa dukaan ka iibsado faaska iyo midida uu ku khaarajiyay. Weli waxaan ka baaraynaa tafaasiil dheeraad ah, marka isbitaalka laga soo saaro,” ayuu raaciyay dembi baare Mr Kingi.
“Wuxuu sheegay inuu marar hore darteed u yimid Eldoret, waxaana u dambeeyay Jimcihii dhowaa. Markii ay muddo yar isla joogeen ayay u sheegtay inay soo xiranayso dharka shaqada, balse markii ay isbitaalka gashay telefoonka ayay ka dansatey, sida uu sheegay,” ayuu yiri madaxa dembi baarista ee qaybta Bariga Eldoret.
“Eedaysanaha ayaa sheegay in uu markaa iska tegey isagoo markale soo noqday Isniintii si uu gabadha markale ula kulmo.
”Balse markii uu Eldoret kusoo noqday ee aanay weli telefoonka ka qabanaynin, wuxuu sheegay inuu dareemay inay quursanayso oo bahdileeyso, waana markaas goorta uu faaska iyo midida ka iibsadey isla Eldoret isagoo aad u afeeyay,” ayuu raaciyay Mr Kingi oo sheegay in marka uu xaalkiisu dego maxkamadda la gayn doono si su’aalo kale loo waydiiyo.
Dembi baaraha ayaa sheegay in wiilka iyo gabadhu ay ilaa carruurnimadii is yaqaanneen, isla markaana ay qoyska gabadhu isu yaqaanneen oo uu xitaa xaafadooda booqan jirey, isagoo muddo dheer saaxiib la ahaa qoyska oo iminka qaadan la’ in Kinuthia uu diley gabadhoodii Ivy, weliba si wuxuushnimo ah oo naxariista ka fog.
Dhakhaatiirta ayaa sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay halis ku jirto isagoo dhaawacyo ka qaba lafaha madaxa oo tarrar ku jiro iyo sidoo kale nudayaasha jilicsan ee jirka kaddib markii ay si xun u garaaceen dadkii kusoo baxay, waxaana isbitaalka soo gaarey waalidkii oo la kulmay.
Previous articleCAANO la cabaa daawo ma u yihiin GAASKA? (Moowduuc caafimaad oo muhim ah)
Next articleWeriye haddii aadan dalkaaga wax ku tarayn wax ha u dhimin (Baroo doorka weriye uu dalkiisu kasoo kabanayo Dagaal Sokeeye)